बाघ गैंडा जोगाउन कुकुर परिचालन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बाघ गैंडा जोगाउन कुकुर परिचालन
२०७० फाल्गुन ८, बिहीबार ०३:५३ गते
भरतपुर । दुर्लभ वन्यजन्तुहरु बाघ गैंडाको आश्रयस्थल चितवन निकुञ्जमा हुने चोरी सिकार रोक्न निकुञ्ज प्रशासनले प्रविधिको उपयोगमा जोड दिन थालेको छ । हेलिकप्टरबाट हवाइगस्ती, मानवरहित विमान ड्रोनबाट गस्तीका साथै निकुञ्जले तालिम प्राप्त कुकुरको पनि प्रयोग गर्ने भएको छ ।
‘हामी चारवटा कुकुरलाई तालिम दिँदै छौँ’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले जानकारी दिए । निकुञ्जमा कुकुरलाई राख्न घर तयार भइसकेको छ । चारवटा बच्चा ल्याएर नौ महिनासम्म तालिम दिने कुँवरले बताए । तालिम पाएपछि कुनै घटना भएमा अपराधीसम्म पुग्न कुुकरलाई उपयोग गरिने योजना निकुञ्जको छ ।
निकुञ्जले एक वर्षअघिबाट मानवरहित विमान ड्रोनको पनि गस्तीमा प्रयोग गरेको छ । क्यामेरासहितको सानो र हलुका सो ड्रोन उड्दै गर्दा तल बसेर भिडियो हेर्न मिल्छ । पैदल जान नमिल्ने क्षेत्रमा ड्रोनबाट फाइदा लिन सकिने कुँवरले बताए । एक वर्षअघिको भन्दा अहिले बढी उपयोगी ड्रोन आएको उनले जानकरी दिए ।
सस्तोमा हवाइ गस्तीजस्तै काम लिन ड्रोन उपयोगी छ, तर यसबाट लामो हवाइ गस्ती सम्भव छैन । निकुञ्जले लामो हवाइ गस्तीको पनि प्रबन्ध गरेको छ । मेघौलीमा प्यारा जम्पिङको तालिम हुने गरेको छ । सोही तालिममा प्रयोग हुने हेलिकोप्टरबाट निकुञ्जमाथि पनि गस्ती सुरू गरेको निकुञ्जमा तैनाथ नन्दाबक्स गणका प्रमुख चक्र शाहले बताए ।
‘चोरी सिकार रोक्न धेरै कुराको सहयोग अपरिहार्य छ । प्रविधि पनि निकै सहयोगी हुने गर्छ । त्यसैले हामीले पनि प्रविधिको सहयोग लिएका हौँ’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँुवरले भने । निकुञ्जमा अहिले १२३ वटा सुरक्षा पोष्टहरु रहेका छन् । जसमा ११ सय सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । चोरी सिकार रोक्न स्थानीयलाई पनि सहयोगमा लिएर अगाडि बढेको निकुञ्ज प्रशासनको दावी छ ।
विश्वमा दुर्लभ मानिएका बाघ गैंडाको चितवन निकुञ्ज मुख्य वासस्थल हो । नेपालमा ५३४ वटा गैंडा छन् । जसमध्ये ५०३ गैंडा चितवन निकुञ्जमा नै छन् । त्यस्तै, देशभरका जंगलमा झण्डै १९८ बाघ रहेकोमा चितवन निकुञ्जमा मात्रै १२० वटा बाघ रहेका छन् । त्यसैले यस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी सिकार हुने खतरा कम गर्न निकुञ्जले हरेक विधि अपनाएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चितवन निकुञ्जमा अघिल्लो वर्षको फागुन पाँचयता चोरी सिकारका कारण कुनै गैंडा नमरेको निकुञ्ज प्रशासनको दावी छ । यसअघि पनि विसं. २०६७ सालको पुस १९ देखि कुनै गैंडा चोरी सिकारीको फन्दामा नपरेका कारण विसं. २०६८ सालको पुस १९ मा निकुञ्जले शून्य चोरी सिकार वर्ष मनाएको थियो । पहिलो शून्य चोरी सिकार वर्ष मनाएपछि २६ महिने अवधिमा दुई गैंडा मरेका छन् ।
पहिलो शून्य चोरी सिकार मनाएपछि विसं. २०६८ सालको चैत्र २० मा खागका लागि सिकारीले गैंडा मारेका थिए । निकुञ्जभित्र गैंडा मरेपछि सिकारी पत्ता लगाउन प्रशासनले सोही बेलामा तालिम प्राप्त कुकुर उपयोग गरेको थियो । कुकुर उपयोग गरेको त्यो पहिलो घटना थियो । कुकुरले सिकारीहरु निकुञ्जको सीमा काटेर घना जंगल भएको भारतीय क्षेत्रमा गएको संकेत गरेको थियो ।
त्यो बेला नेपाल प्रहरीसँग भएको कुकुर प्रयोग गरिएको थियो । यो पटकदेखि निकुञ्ज आँफैले कुकुरको व्यवस्था गर्न लागेको हो । चितवन निकुञ्ज क्षेत्रमा गैंडाको सिकार ठप्पजस्तै भए पनि गैंडा पाइने अन्य देशहरुमा मौलाएको छ । त्यसैले खतरा जुनसुकै बेलामा पनि फर्कन सक्ने ठानेर आफूहरु सतर्क भएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कुँवर बताउँछन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरका अनुसार सन् २०१३ मा दक्षिण अफ्रिकामा चोरी सिकारीका कारण एक हजार चार गैंडा मरे । त्यस्तै, केन्यमा ५० र भारतको काजिरंगा नेशनल पार्कमा ३५ गैंडा मरेको उनले जानकारी दिए । यस्तो अवस्थामा नेपालमा चोरी सिकार रोकिनु यहाँ संरक्षण कार्य सुदृढ बनेको प्रमाणित हुने कुँवर बताउँछन् ।
तस्करहरुको सञ्जाल सुरक्षामा जहाँ कमजोरी छ, त्यही घुस्ने गर्छन् । पहिला काजिरङ्गामा तीन वर्ष गैंडा मरेनन् तर चितवन निकुञ्जमा चोरी सिकारी मौलाएको थियो । ‘अहिले हाम्रोमा नियन्त्रणमा आयो । काजिरङ्गामा फष्टायो । त्यसैले अहिले रोकिएको छ भनेर ढुक्क मानेर बसिदैन । सुरक्षा संयन्त्रलाई जे जसरी हुन्छ मजबुद बनाउनैपर्छ’ कुँवरले भने ।
सुरक्षा पोष्टहरुमा पनि सुविधाहरु थपेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कुँवरको भनाइ छ । पहिला सुरक्षा पोष्टहरुमा टुकी बालेर बस्ने गर्दथे । मोवाइलको सुविधा लिन गाह्रो थियो । अहिले सोलार प्यानल राखेका कारण बत्ती बाल्न र मोबाइल चार्ज गर्न सुविधा भएको उनले बताए । नेपालमा विसं. २०५८ सालमा एकै वर्षमा चोरी सिकारीले ३७ गैंडा मारेका थिए ।